Al-Shabaab Oo Shaacisay Inay Dib Ula Wareegtay Deegaano Ku Yaalla Sh/Dhexe...
Al-Shabaab oo shaacisay inay dib ula wareegtay deegaano ku yaalla Sh/Dhexe…
Jowhar (Wararka Maanta) – Dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay markale dib ula wareegeen deegaanadii ay dhowaan ka qabsadeen ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku yaalla gobolka Shabeelaha Dhexe.
Qoraal kasoo baxay Al-Shabaab, isla-markaana lagu baahiyey baraha bulshada ee Internet-ka ayaa waxaa lagu sheegay in dagaalyahanadooda ay haatan ku sugan yihiin deegaanada War-Ciise, Qoordheere, Wararaxley iyo kuwa kale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay saaka si nabdoon kula wareegtay deegaanadaasi oo dhowaan howl-gal milatari ku qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya, kadib dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee caasimada maamulka HirShabelle.
Wararka Maanta : Xulka kubada cagta Soomaaliya oo guul darro kala kulmay xulka Cumaan
Wararka ayaa intaasi ku daraya in haatan ciidanka dowladda ay ku sugan yihiin deegaanka Biyo-Cadde oo ay saldhig ku leeyihiin ciidanka AMISOM, gaar ahaan kuwa Burundi.
Sidoo kale labada dhinac ayaa dhaq-dhaqaaqyo culus ka wada deegaanadaas, iyada oo shacabka ku dhaqan halkaasina ay cabsi ka muujinayaan in dagaal uu ka dhaco halkaasi.
Ciidamada Xoogga dalka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay xoojiyey dhaq-dhaqaaqyada ay ka wadaan gobolka Shabeelaha Dhexe oo ay ka dhaceen dagaallo culus oo uu khasaare xoogan kasoo gaaray labada dhinac, kadib markii ay isku fara-saareen gudaha gobolkaasi.
Wararka Maanta : Xog: Rooble oo fuliyey ballan uu ka qaaday madaxweyne Xasan Sheekh...
Al-Shabaab ayaa weli ku xoogan deegaanada maamulka HirShabelle, iyaga oo deegaano badan ka heysta gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee maamulkaasi.
Related Topics:AlShabaabdeegaanoDibFeaturedinayshaacisayShdhexeulaWararka Maantawareegtayyaalla
Somaliland oo amar culus dul-dhigtay musharraxiintii guuleystay + sababta -…
Sawirro: Dadweyne ka careysan doorashada Somaliland oo dibad-bax dhigay -…
Xukuumadda Sweden oo Weyday Kalsoonida Baarlamanka
Arsenal Oo Hogaamineysa Loolanka Loogu Jiro Ciyaaryahanka Khadka Dhexe Ee…
Wararka Maanta : Madaxweynaha Soomaaliya oo u hambalyeeyay xoghayaha qaramada Midoobay oo...
Wararka Maanta : Maxkamada ciidamada Puntland oo soo gabagabaysay dacwadda racfaan xubno...
Wararka Maanta : Xaaladda Caafimaad ee MW Zambia oo Soo Hagaagtay Kaddib Markii uu...
Wararka Maanta : Soomaaliya iyo Ethiopia oo Muqdisho ku kala saxiixday heshiis ku saabsan...
Golaha deegaanka magaalada Buuhoodle oo mayor u doortay haweenay
Isniin, Juun, 21, 2021 (Wararka-Maanta) – Xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Buuhoodle, ayaa mayor u doortay Khadiija Axmed Yuusuf halka ay mayor ku xigeena u doorteen Mustafe Cabdi Ayaanle.Khadiija oo kasoo baxday xisbiga Kulmiye, ayaa noqonaysa gabadhii ugu horaysay ee mayor loo doorto guud ahaan Somaliland.
Khadiija ayaa kamid ahayd 3 dumar ka ah ee kaliya ee kasoo baxay 28 haween ah, oo u sharaxnaa doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee dabayaaqadii bishii hore ka qabsoomay Somaliland.
Wararka Maanta : Toogashada Mareykanka oo faraha kasii baxeysa - Wararka Maanta: Somali...
“Waxan balan qaadaya si hufnaan iyo daacad nimo ku jirto in aan ugu shaqeeyo dadkayga” sida waxa tidhi Khadiija kadib markii la doortay.
“Dowlad dayda waxan ka codsanayaa in ay sigaara iila shaqayso” ayay hadalkeeda sii raacisay Khadiija.
Xildhibaanada codka siiyay mayor Khadiija, ayaa sheegay in ay codka u siiyeen karti iyo hufnaan ay ku arkeen darteed.
Talaabadan ayaa ah mid aan hore uga dhici jirin guud golayaasha deeganada Somaliland, waxayna Khadiija noqonaysa gabadhii ugu horaysay ee mayor loo doorto.
Weerar lagu dilay dad horleh oo ka dhacay dalka Ethiopia – Caasimada O…
Addis Ababa (Wararka Maanta) – Wararka ka imaanaya caasimada dalka Ethiopia ee Addis Ababa ayaa sheegaya in weerar sababay dhimashada 9 qof uu ka dhacay degmada Metta Wolkitte oo 100-KM u jirta caasimada dalkaas.
Weerarka oo ka dhacay dhismaha buundada degmada Metta Wolkitte ayaa imid kadib markii kooxda fulisay ay ku amreen shaqaalaha inay joojiyaan dhismaha buundada, taasi oo ay iska dhago tireen, sida ay sheegen qaar kamid ah ehelka dhibanayaasha
“Dagaal-yahanada ayaa u sheegay shaqaalaha dhismaha buundada iney joojiyaan, laakiin way sii wadeen shaqada, maadaama uu ka baqayey inuu waayo shaqadiisa,” ayuu yiri mid kamid ah ehelka dadka ay waxyeeladu kasoo gaartay weerarkaas.
Dadka la dilay oo u badnaa shaqaalihii ku howlanaa dhismaha buundada ayaa sidoo kale waxaa kamid ahaa Nin la sheegay in uu cabitaanka bunka ah uu ku iibinayey wadada hareeraheedda.
Faah-faahin intaas ka badan weli lagama hayo weerarkaan, hase yeeshe waxa uu qeyb ka noqonayaa qalaalasaha amni darro ee ka jira Ethiopia, tan iyo markii uu bilowday dagaalka qowmiyaduhu.
Wararka Maanta : Xasan Sheekh Maxamuud "Dhalinyaradii loo qaaday Eretariya madaxda talada...
Dhacdadaan ayaa Saraakiisha qaar ay sheegen inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin doorashada dalkaas oo maanta loo dareeray, maadama ay isasoo tarayaa walaac dhanka amaanka ah.
Wararka Somali11 mins ago
Warka Caalamka8 hours ago